#Neymar oo tababarka qaranka Brazil ku yimid diyaaradaha helicopterkiisa cusub - qiimaheedu waa €13 Milyan - Get Latest News From Horn of Africa
#Neymar oo tababarka qaranka Brazil ku yimid diyaaradaha helicopterkiisa cusub – qiimaheedu waa €13 Milyan
Neymar , 27, waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan kubada cagta. Sida laga soo xigtay Goal, xiddiga qadka dhexe ee reer Brazil ayaa ka qaata 400 milyan oo karoon dalka sweden ah sanadkiiba.
Weeraryahanka Paris Saint Germain – Neymar Junior ayaa tababarka xulka Brazil ku tagay diyaarad nuuca qumaatiga u kacda ah oo nuuceeda lagu sheegay Airbus H-145.
Diyaaradaan waxaa lagu sheegay dhirirkeeda 13.64 mitir, halka balaceeda uu yahay 3.95 mitir, waana mid ka mid ah farsamada shirkadda weyn ee Mercedes Benz.
Sida warbixintaan lagu xaqiijiyay, Neymar Junior isaga ayaa leh diyaaradaan waxeyna ugu fadhisaa qiimo dhan 13 Malyan oo Yuuro, kalarkeeda wuxuu doortay Madow iyadoo magaciisa iyo tilmaamaha kalaba lagu qoray kalar cadaan ah.
Diyaaradaan waxey saacadii jari kartaa xawaare dhan 248 KM.
Neymar sidoo kale wuxuu leeyahay diyaarad kale oo khaas ah, wuxuuna isticmaalaa marka uu safarada dhaadheer galayo, sidaas darteed xiddiga ugu qaalisan dunida wuxuu ku raaxeysanayaa dakhliga uu ka helo PSG.
Xiddigii hore Barcelona wuxuu kula midoobay saaxiibadiisa xerada tababarka ka hor bilowga Copa America oo bisha June ee soo aadan ka furmi doona isla Brazil.